नेपालमा कोरोनाबाट थप २ को मृत्यु, मृतकको संख्या ३४ पुग्यो
काठमाडौं, २० असार-नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमणबाट गोरखा र रुपन्देहीका १/१ पुरुषको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन् ।
उनका अनुसार गोरखाको पालुङटार नगरपालिका-७ बस्ने २४ वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो । शुक्रबार मधुमेहका रोगी उनी निमोनिया भएर गोरखा अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएकोमा शनिबार बिहान ५ बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
उनको हिजो कोरोन पुष्टि भएको डा. गौतमले जानकारी दिए । उनी असार १७ गते कतारबाट नेपाल फर्किएका थिए । सोही दिन उनलाई पालिङटार क्वारेन्टाइनमा राखिएको उनले बताए । उनको शव सेनाले व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका ७५ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । १४ असारमा टिचिङमा भर्ना क्षय रोगको उपचार गरिरहेका उनको १७ असारमा त्रिविमै मृत्यु भएको थियो । उनको १८ असारमा कोरोना पुष्टि भएको उनले बताए । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ ।
57 mins अगाडि
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँग समसामायिक विषयमा छलफल
शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्री फिर्ता, मन्त्रीहरू पुगे बालुवाटार